Amaphromoshini Asehlobo - Isikhungo Semfundo Yezilimi ezimbili
Ikhaya IsipesheliAmaphromoshini asehlobo
Ihlobo Elishisayo… Amaphromoshini Ashisayo !!!
Ukukhushulwa kwehlobo kwandisiwe ku-BEI! Ungaphuthelwa yithuba lakho loku Qala uhambo lwakho lokufunda Manje!
Amakilasi aku-inthanethi noma e-On-campus.
Ikhampasi Encane Ephephile
Iminyaka engama-39 Yokwenza kahle !!!
* Izipesheli - Kungasebenza imigomo nemibandela ehlukile